IXESHA LESITHSABA 2: LELIPHI IBALI LOKWENYANI LENTETHO YEKUMKANIKAZI YEKRISIMESI? IMBALI YENETFLIX ITYHILWE KWIMBALI-YERADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Lichane kangakanani ibali leNkosana yoMyalezo weKumkanikazi yeKrisimesi?
Intetho yeKumkanikazi yeKrisimesi ikhulisa kabini kwixesha lesithsaba lesibini: kanye kwisiqendu sesibini, xa uFilipu ehambisa usasazo lukanomathotholo ukusuka embindini wehlabathi, kwaye kanye kwisiqendu sesihlanu, xa uKumkanikazi emema iikhamera kumyalezo wakhe wokuqala weKrisimesi.
Fumana ngakumbi malunga nezi ndawo zibalulekileyo zembali yosasazo yaseBritane apha ngezantsi.
Yonke into ofuna ukuyazi malunga nexesha lesibini leCrown
Yayinjani iNkosana uPhilip njengomfana oselula?
Fumanisa imbali yokwenyani yomqhele
Iphi i-Queen's Christmas Speech kwiTV kulo nyaka?
Ithini imbali yoMyalezo weKumkanikazi yeKrisimesi?
Xa uKing George V wayisa kumoya we-BBC kwi-Empire Service ngo-1932 waza wenza intetho yeKrisimesi kubantu bakhe emhlabeni jikelele, waqala isiko elitsha lobukhosi - kodwa kwakungekho ngaphandle kokukholisa.
Uluvo lokuba inkosi isasaza uMyalezo weKrisimesi yaqala ukuphakanyiswa ngo-1922 nguJohn Reith, umseki we-BBC-kodwa uKumkani wayengafuni kwanto edibanisa nonomathotholo, olu hlobo lutsha lokuzonwabisa.
Kwiminyaka elishumi kamva, wagqitywa ukuba ahlale phantsi edesikeni yakhe eSandringham House ngeKrisimesi kwaye athethe kwimakrofoni. La ntetho yokuqala yabhalwa nguRudyard Kipling kwaye wabongoza bonke abazizigidi ezingama-20 ukuba bazimisele ukuchuma ngaphandle kokuzifunela.
Intetho ibibetha. Emva kokusweleka kwakhe kwabakho iKrisimesi enye ngaphandle komyalezo ovela kwinkosi, njengoko u-King Edward VIII engapheli ixesha elingaphantsi konyaka kwaye wabamba iiveki nje ezimbalwa phambi kweKrisimesi - kodwa umntakwabo (kunye notata ka-Elizabeth) u-King George VI waphinda waluvuselela usasazo kunyaka olandelayo.
Emva kokusweleka kukatata wakhe, uElizabeth II wamnika umyalezo wakhe wokuqala weKrisimesi ovela kwisifundo sakhe eSandringham House nge-3.07pm nge-25 kaDisemba ngo-1952, esebenzisa idesika kunye nesihlalo esifanayo njengoyise notatomkhulu wakhe ngaphambi kwakhe. Ubulele abantu ngokunyaniseka nothando lwabo kwiinyanga zakhe zokuqala njengoKumkanikazi.
Ngaba iNkosana uPhilip wayisasaza eyakhe intetho yeKrisimesi kuKhenketho lweCommonwealth?
Ewe. Kwi-1956, iNkosana uPhilip yayisele ingekho kwiKumkanikazi iinyanga ezininzi kuhambo lwayo lokujikeleza i-Commonwealth xa yayisasaza unomathotholo ngoSuku lweKrisimesi kwiRoyal Yacht Britannia. Umyalezo wakhe walandelwa yiNtetho kaKumkanikazi evela eSandringham House.
Ukumkanikazi wabhekisa kumyalezo womyeni wakhe, esithi wawunike yena nabantwana babo uvuyo olukhulu. Wayemnqwenelela uhambo oluhle kwaye wavakalisa usizi lwakhe lokwahlukana naye, eqhubeka nokwabelana ngovelwano nabo bachitha iKrisimesi ngaphandle kwabathandekayo babo kwaye ecela abaphulaphuli ukuba bacinge ngeembacu kunye nebali lokuzalwa kukaKristu.
Umyalezo wakhe kuFilipu wawusithi: Kuwo onke amalungu osapho ahlanganisene apha namhlanje iminqweno emihle kuthi maniye kuye nakubo bonke abakhwele eBritannia, njengoko nindwendwela kunye kwiilwandle ezisemazantsi. Ikrismesi emnandi kuthi sonke.
Kutheni le ntetho ye-Queen's Speech yenziwa kumabonakude okokuqala ngo-1957?
Umabonwakude wayesele ekho iminyaka ngo-1957, kodwa uKumkanikazi wayephephe ukwenza intetho yeKrisimesi. Okubi ngakumbi kunoko, abagxeki babeqale ukubeka isimbo sakhe kunye nendlela yakhe yedilesi, bemtyhola nge-banal platitudes.
Kwathi ngo-1957, intatheli kunye nomhleli uJohn Grigg- okanye u-Lord Altrincham- wabhala inqaku elitshisayo kupapasho lwe National and English Review.
Ubuntu obudluliswa ngamazwi abekiweyo emlonyeni wakhe ngowentombazana yesikolo ebambekayo, umphathi weqela le-hockey, umphathi, kunye nomgqatswa wokugqibela wokuqinisekisa, ubhale watsho. Enganyanzelisi amazwi akhe, wambiza isitayile sokuthetha iintlungu entanyeni.
Inqaku labangela isiphithiphithi kunye nehlazo, kodwa ayinguye wonke umntu ongavumelani- kwaye yonyusa uxinzelelo kuKumkanikazi ukuba ameme i-BBC kwikhaya lakhe ngeKrisimesi. Wenza ke.
KwiCrown, uClaire Foy ubonakalisa ukumkanikazi phambi kokuba athumele idilesi ebalaseleyo. Ngapha koko, ichanekile ngokuchanekileyo, kuba usasazo lokuqala lweTV lwalumbangela ixhala elininzi.
I-Radio Times yabhala ngo-1986: uKumkanikazi akahlali elonwabela ishishini losasazo lweKrisimesi. Wayengakhululekanga ngokusasazwa kwakhe okokuqala kumabonakude ngo-1957, xa iikhamera zazifihla imakrofoni ngasemva kwe-holly kodwa zatyhila izandla ezixineneyo nezingaxutywanga ukuba zibonwe ngumntu wonke. ‘Kuyoyikeka, akunjalo?’ Ukhathazekile yindlela aqhube ngayo kwieperile nakwigolide ye-lamé yasemva kwemini.
Umbhali uDaphne du Maurier walungiselela iingcebiso zokuyila ukumnceda, kwaye umsasazi we-BBC uSylvia Peters wamnika isifundo ngeendlela ezintlanu ezilungileyo zokwenza intetho kumabonakude, kodwa ekugqibeleni uyilo lokugqibela yayilelikaPrince Philip.
Uxelile uxelele inkundla emva koko: Ndiyathemba ukuba iKrisimesi ihambe kakuhle. Owethu wayecatshukiswe ngumabonwakude, owayesoyikisa.
Ixesha lesibini lesithsaba liyafumaneka kwiNetflix ngoku
Umda wexesha lomsebenzi 5 umhla wokukhutshwa
njani ivoldemort yaphulukana nempumlo
iphuma nini inzala yesibini
ngubani osadibanisene nesiqithi sothando
umkhosi katata iziqephu ezilahlekileyo ezilahliweyo
Yeovil idolophu vs man united